Nrụpụta Dijitalụ | Prototypes & Parts Production Parts - Createproto - Mepụta Techpro, Tech Co., Ltd.
Gbasara Anyị / Ndị Anyị Bụ
Createproto hiwere na June 2008 site Simon Lau, a Mechanical Engineer chọrọ radically belata oge ọ ga-enweta ọgwụ-akpụzi plastic prototype akụkụ. Ngwọta ya bụ iji mepụta usoro nrụpụta ọdịnala site na ịmepụta sọftụwia dị mgbagwoju anya nke na-ekwukọrịta na igwe igwe na igwe. N'ihi ya, enwere ike ịmepụta plastik na akụkụ ígwè n'ime obere oge ọ dịtụtụrụla tupu mgbe ahụ. n'ebumnuche nke ime ka uche nke ihe omuma di n'icheputa uwa. Ọbụna ka anyị na-amụbawanye ọrụ anyị gburugburu ụwa, mmụọ ahụ na-eduzi anyị. Onye ọ bụla so n’òtù ndị ndu anyị raara onwe ya nye ịma aka ọnọdụ dị na nkwụsị na-adịghị akwụsị akwụsị iji melite otu anyị si ejere ndị ahịa anyị ozi.
N'ime afọ iri na-abịanụ, anyị ga-anọgide na-agbasa envelopu anyị na-agbanye ọgwụ, na-ewebata ngwa ngwa ngwa ngwa CNC.
Na 2016, anyị bidoro ọrụ mbipụta akwụkwọ 3D nke ụlọ ọrụ iji nye ndị mmepe ngwaahịa, ndị na-emepụta ihe, na ndị injinia ụzọ dị mfe iji si na mbido mmalite gaa na nrụpụta obere olu.
ANYA ANYIS Ime ka usoro nhazi dị mfe, n’emebighị ogo ha.
ANY M ANYIS Iji nye ndị nnyefe nke elu àgwà ngwaahịa ka anyị zuru ụwa ọnụ ahịa.
Offọdụ ụlọ ọrụ kachasị na gburugburu ụwa na-echigharịkwuru anyị mgbe ha chọrọ ọnụ, akụkụ akụkụ ọdịnala na usoro siri ike. Ma ọ bụghị naanị n'ihi na anyị na-atọ ụtọ ịrụ ọrụ. Ọ bụ n'ihi na anyị kọwaa na imepụta ihe dị mfe.
ANY WE NA-EJU BLỌ AKA AKA
Na Createproto, anyị nwere mmasị ịsị na anyị abụghị ụlọ ọrụ nna gị. Anyị kpochapụrụ nsogbu azụmaahịa-dịka ọ na - adịkarị - oge ụzọ, usoro ochie, usoro anaghị agbanwe agbanwe, ogo a na - apụghị ịdabere na ya-ilekwasị anya na ọrụ anyị niile na gị: mkpa gị, nkọwa gị, mmefu ego gị, na oge gị.
Ndị ahịa anyị na ndị ọrụ ahịa anyị dị site na elekere asaa nke ụtụtụ ruo elekere isii nke mgbede CST, Mọnde ruo Fraịde, iji nyere aka na iwu ma zaa ajụjụ ọ bụla gbasara ọrụ anyị. I nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị n'ịntanetị n'oge ọ bụla.
Lọ ọrụ tinye: 3rd Building, Tanglian 3 Street, Tangxia Town, Dongguan, 523710 China.